Top 5 UK Ekekọrịta Akaụntụ Aka - Free February 2021 Guide - Mụta 2 Trade
Akaụntụ Kachasị Ego Nke UK kacha mma 2021
Ọ bụrụ na ị nọ na UK ma ịchọrọ itinye ego na ahịa ngwaahịa, ị ga-emepe emepe akaụntụ nnabata ahịa. Ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-akwado ha nke nwere ụlọ ọrụ ndị edepụtara aha ha. Na nloghachi, ị ga-akwụ ụgwọ ego oge ọ bụla ị tinyere ego.
A na-ebo ebubo nke a mgbe ịzụrụ ma ọ bụ ree ngwaahịa ma nwee ike gbanwee ma ọ bụ dozie ya. Ka o sina dị, site na narị otu narị akụkọ na-emekọrịta ihe ugbu a na UK, ịkwesịrị ịhọrọ usoro ikpo okwu nke ga-emezu ebumnuche itinye ego gị ogologo oge.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị na Akaụntụ Akaụntụ Kasị Mma nke UK nke 2021. Ọ bụghị naanị na anyị na-akọwapụta nyiwe ise kachasị mma ugbu a n'ahịa, mana anyị na-enyekwa ụfọdụ ndụmọdụ bara uru banyere ihe ịkwesịrị ịtụle tupu ịmalite ihe akaụntụ.
Mara: Ọ bụrụ n ’ịchọrọ itinye ego na mbak, mgbe ahụ ịkwesịrị ịdị njikere ịbupu ebili mmiri ụfọdụ. Ọchịchị isi mkpịsị aka bụ ijidesi ego gị ike ma ọ dịkarịa ala afọ ise.
Gịnị bụ Ekekọrịta Akaụntụ Akaụntụ?
Iji zụta ma na-ere mbak online, ị ga-mkpa iji a stockbroker. Mgbe ị mepee akaụntụ na onye na-azụ ahịa maka ebumnuche a, ị ga-emepe akaụntụ na-emekọrịta ahịa. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ejikọghị akaụntụ azụmaahịa ejighị ya naanị zụta ma ree ebuka. Kama nke ahụ, ha na-ekwe ka itinye ego n'ime ego, agbụ, ETFs, na indices.
Ka o siri dị, akaụntụ gị na-emekọrịta ahịa bụ ụlọ ahịa otu nkwụsị maka pọtụfoliyo itinye ego gị niile. N'ihe banyere ihe ndị bụ isi, ihe ka ọtụtụ n'akụkọ azụmahịa na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-emepe akaụntụ, nyochaa njirimara gị, wee tinye ego. Mgbe nke ahụ gasị, a ga-achọrọ ka ịhọrọ itinye ego gị na Mee N'onwe Gị.
Nke a pụtara na ị ga-enwe ụdịrị ihe ọmụma na ahịa ahịa iji nwee ike ịmata ụlọ ọrụ ndị ga-arụ ọrụ. Na nke ahụ kwuru, ndị ahịa ọhụụ ọhụụ nwere ike bụrụ ihe kacha mma iji jikọta ego, dịka ego ahụ ga-ahọrọ ma họrọ akụ nke itinye ego na ya. Na nloghachi, ị ga-akwụ ụgwọ mmezi kwa afọ, n'agbanyeghị, itinye ego bụ 100% n'ezigbo.
N'ihe gbasara ụgwọ, kesaa ihe ndekọ azụmaahịa na-abịakarị na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-azụ ahịa ọrụ. Banyere nke mbụ, ị ga-akwụ pasent nke ego ị tinyere. Dịka ọmụmaatụ, itinye ego £ 1,000 na Apple na 1% ga-efu gị ego nke £ 10. Ọ bụrụ na ọ bụ ego akwụkwụ ụgwọ, ọrụ ahụ ga-adị otu n'agbanyeghị ego ole ị tinyere. More banyere nke a mgbe e mesịrị.
Uru na ọghọm nke Ekekọrịta Akaụntụ Aka
Andzụta na ire ebuka na mbak site na nkasi obi nke ụlọ gị
Nwere ike itinye ego na akụ ndị ọzọ dịka ego ego, agbụ, na indices
Esgwọ ugbu a na-asọ mpi maka ndị ahịa azụmaahịa
A na-akwụ ụgwọ di iche na akaụntụ gị na-emekọrịta
Jikọọ akaụntụ gị na-emekọrịta ihe na ISA
Ọ na-ewe ihe karịrị nkeji 10 iji mepee akaụntụ
Debe ma wepu ego site na iji ego ma ọ bụ akaụntụ akụ
Akaụntụ UK na-achịkwa FCA
Enweghi ike ire ere ma ọ bụ tinye ego
Ikwesiri ịhọrọ ego nke gị
Ofdị itinye ego na Akaụntụ Share
Dị ka aha ahụ na-egosi, akaụntụ ịmekọrịta òkè na-enye gị ohere itinye ego na mbak. Agbanyeghị - na dịka anyị kwuru n'elu, ị nwekwara ike itinye ego na klaasị ndị ọzọ bara uru.
N'okpuru ebe anyị edepụtarala ụdị itinye ego kachasị dị iche iche nke na-emekọrịta akụkọ gbasara ikike.
✔️ UK-Edepụtara Ahịa
Ebumnuche doro anya bụ ụlọ ọrụ ndị edepụtara n'ihu ọha na UK. Ọ bụrụ na ha dị, ha nwere ike debanye aha na London Stock Exchange. Chee echiche banyere British American Tobacco, BP, Barclays, na Lloyds. Imirikiti ịkekọrịta akụkọ ga-enye gị ohere ịnweta ọbá akwụkwọ dum nke ụlọ ọrụ FTSE 100, yabụ enwere ọtụtụ ohere iji gbasaa.
N'otu aka ahụ, kesaa akụkọ azụmahịa na-enyekarị gị ohere ị nweta ebumnuche. Maka ndị na-amaghị, nke a bụ mgbanwe ngwaahịa ngwaahịa na UK nke na-edepụta obere ụlọ ọrụ pere mpe na-erughị oke maka London Stock Exchange. Ahịa na AIM na-agbanwekarị ma na-ata ahụhụ site na ọkwa dị ala, yabụ buru nke a n'uche.
Res Ahịa International
Ọ bụrụ n'ị na-achọ ịgbasa n'ime ahịa ndị na-abụghị UK, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na ọtụtụ kesara akụkọ na-eme ka nke a kwe. N'ọtụtụ ọnọdụ, onye na-ere ahịa ga-enye gị ohere ịnweta ahịa ahịa abụọ nke US - NASDAQ na New York Stock Exchange.
Nke a bụ otu ị ga - esi nwee ike itinye ego na ụlọ ọrụ dịka Apple, Facebook, Ford Motors, Disney, na Nike. Ọ dị mkpa ka ị nyochaa ego ndị gbara mba ndị ọzọ na-etinye ego. Nwekwara ike ịkwụ ụgwọ ego ọzọ iji kwụọ ụgwọ nke itinye ego na ego ọzọ karịa GBP.
Ex Index (Ndekọ)
Ndepụta (ma ọ bụ Indices) na-enye gị ohere itinye ego na ahịa ahịa buru ibu na-enweghị ịhọrọ ụlọ ọrụ ọ bụla. Na UK, ndeputa ndekota bụ nke FTSE 100. Maka ndị na-amaghị, nke a nwere ụlọ ọrụ 100 ndị edepụtara n'ihu ọha na London Stock Exchange.
Yabụ, kama ịnwe 100 mbak, ị nwere ike itinye ego na ụlọ ọrụ 100 niile site na otu ahia. Nchịkọta mmiri kachasị elu n'ụwa bụ S&P 500, nke na-eso 500 ụlọ ọrụ kachasị ukwuu edepụtara na US. Mgbe ahụ ị nwere Dow Jones, nke na-eso nnukwu ụlọ ọrụ 30 sitere na mpaghara dị iche iche.
Ọ bụrụ n'inweghi ahụmịhe ma ọ bụ ihe ọmụma banyere itinye ego, mgbe ahụ anyị ga-atụ aro ịtụle ego maka ibe gị. Na nkenke, ego ego na-azụrụ ma na-ere ihe onwunwe n'aha ndị na-etinye ego ha. Site na ijikọ ego gị na ọtụtụ puku ndị ọzọ na-etinye ego, nke a na-enye ego a ọtụtụ ijeri paụnd agha obi.
Agbanyeghị na a ga-achọ ka ịkwụ obere ụgwọ ndozi mgbe ị na-etinye ego na ibe ya, ọ bara uru ọnụahịa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ego ahụ ga-agụnye otu ndị na-etinye ego na-azụ ahịa nke ukwuu, ndị ga-akwado teknụzụ na-enweghị oke. Ọzọkwa, a na-ejikwa ego ahụ eme ihe n'ụzọ zuru ezu, yabụ ị ga-enweta mkpụrụ nke ego na-abaghị uru.
✔️ Nkekọ & Gilts
Onu ogugu ndi ozo nke ego na akuko nke nwere ike ikwado bu nkekọ na Gilts. Nkekọ na-achọ nchikota ego na nloghachi, ị ga-enweta ịkwụ ụgwọ ọmụrụ nwa ruo mgbe agbụ tozuru Mgbe ha mere, ị ga-enweta ego mbụ gị zuru ezu.
Gilts na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dịka agbụ, agbanyeghị, ndị gọọmentị UK na-enye ha. Ya mere, agbanyeghị na ha enweghị ihe ọghọm, ihe a na-enye dị obere.
Olee otu Ekekọrịta Ejiri Akaụntụ Na-arụ Ọrụ?
Usoro nke inwe mbak adịghị mfe dị ka ịbanye n'ime akaụntụ ntanetị ahịa gị n'ịntanetị na ịzụrụ. Ọfọn, ọ bụ maka gị - mana ọ bụghị maka onye na-ere ahịa n'onwe ya. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ na-aga n'azụ Mpaghara. N'ihu banyere nke a bụ mmekọrịta onye na-ere ahịa na ahịa ndị bụ isi.
See hụrụ, iji nwee ike ree ebuka na ndabere nkekọrịta, onye na-ere ahịa ga-ezute opekata mpe.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na onye na-ere ahịa chọrọ ịkesa ndị ahịa Britain British Taba.
Enwere ike ịchọ ka onye na-ere ahịa ya zụta £ 500,000 uru nke mbak iji nweta isi ahịa ma si otú a - kwụọ ụgwọ otu ọnụego dịka oghere ụlọ ọrụ.
Mgbe ahụ, ha ga-enwe ike ire ahịa osisi ndị Britain nke ndị ụtaba site na akụkọ ndekọ ahịa ya, na-agbakwunye ntakịrị akara n'ụzọ.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ọhụụ ọhụrụ na-enye gị ohere ịzụta oke mbak. Nke a anaghị enye gị ohere itinye ego n’emebighị akụ, mana ọ na - eme ka usoro ịgbasawanye dịkwuo mfe.
Ekekọrịta Akaụntụ Akaụntụ: Fegwọ na isslọrụ
Ekekọrịta ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa na-azụ ahịa, yabụ ị ga-akwụ ụgwọ mgbe ị na-etinye ego. Nke a na - abata n'ụdị ọrụ na - agbanwe ma ọ bụ ego ewepụghị. Ọ dị mkpa na ịmara ọdịiche dị n'etiti abụọ, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na nke a kwesịrị ịkọwa ụdị nke oke na-emeso ya akaụntụ ị debanyere aha.
Commission Ọrụ na-agbanwe agbanwe
Ọ bụrụ na onye na-ahụ maka azụmaahịa na-emekọrịta akaụntụ na-ebo ebubo ọrụ na-agbanwe agbanwe, mgbe ahụ, a ga-agbakọ ụgwọ gị megide oke nke itinye ego gị. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye na-ere ahịa na-ebu ebubo 2% kwa azụmaahịa ma ịchọrọ itinye ego na mbak BP.
Purchase na-azụta £ 5,000 nke mbak na BP
Na kọmitii nke 2%, nke a ruru ego nke £ 100
Afọ anọ ka nke a gasịrị, ego 5,000 BP gị bara uru ugbu a £ 7,500, yabụ ị kpebiri ire mbak
Na kọmitii nke 2%, ire ere sale 7,500 ga-abụ ego nke £ 150
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, a na-akwụ ụgwọ ọrụ ụgwọ na nsọtụ abụọ nke azụmaahịa - mgbe ị ịzụta na mgbe ị ere. N’ụzọ dị oke mkpa, ị ga-ahọrọ usoro ego na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa pere mpe. Ma ọ bụghị ya, nnukwu itinye ego ga-ata gị nnukwu ụgwọ.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-emekọrịta akaụntụ na-ebufe ọnụego ewepụghị, ego ahụ agaghị agbanwe agbanwe. Ma ị na-etinye ego £ 1 ma ọ bụ £ 10,000 - ị ga-akwụ otu ụgwọ mgbe niile. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na-5- £ 12 kwa ahia, yabụ ọ kachasị mma ịzụ ahịa. Anyị na-ahụkarị na ndị na-ere ego dị ala na-enyekarị anụ na ọkpụkpụ ọrụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-enwe ike ịzụta mbak ịchọrọ itinye ego na ya, n'agbanyeghị, ị gaghị enweta ihe ọ bụla n'ụdị nyocha, ngwaọrụ agụmakwụkwọ, ma ọ bụ nkwado ndị ahịa kachasị elu. Ego kachasị mma maka ndị gị na-eme atụmatụ itinye ego buru ibu. Nke a ga-edebe gị ahia n'ịntanetị na-efu oke pasent pere mpe-maara ihe.
Fegwọ ndị ọzọ a ga-atụle
Magwọ Nlekọta Kwa Afọ: Ọ bụrụ na ị kpebie ịchụ ego na-abaghị uru site na ego ibe gị, ị ga-akwụ ụgwọ ego kwa afọ. Nke a adịkarịghị karịa 1% kwa afọ, a na-ebo ya ebubo maka uru ego gị bara.
Ego Platform: Ego a na-akwụ ụgwọ dị iche na ego mmezi ego, ebe ọ bụ ego onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ. Nke a bụ ego ịkwesịrị ịkwụ iji jiri ikpo okwu, a na-ebokarị ya otu ụzọ n'ụzọ anọ ma ọ bụ kwa afọ.
International Markets: N'adịghị ka nyiwe CFD, kesaa ndị na-ere ahịa akaụntụ ga-akwụ gị ụgwọ iji nweta ahịa mba ụwa dịka New York Stock Exchange ma ọ bụ NASDAQ.
Mgbanwe ego: Ọ bụrụ na ị kpebie itinye ego na klas akụ na-abụghị aha na GBP, mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ego ntụgharị ego.
Etu esi emeghe akaụntụ nnabata Share
Ọ bụrụ n’ịdị njikere ibido njem ego gị site na imepe akaụntụ taa, anyị ga - egosi gị ihe ikwesiri ime
Nzọụkwụ 1: Họrọ Share Broske Akaụntụ Broker
Ga-ebu ụzọ họrọ onye na-azụ ahịa ntanetị n'ịntanetị nke na-enye ndị na-etinye ego na UK azụmaahịa maka ịkọ akụkọ. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na onwe gị, anyị ga-atụ aro ịpụ otu n'ime nyiwe ise anyị depụtara n'ihu na ntuziaka anyị.
Ọ bụrụ na ịnwe oge, ịkwesịrị ịtụle ọtụtụ ihe tupu ị debanye aha. Nke a kwesịrị ịdabere na iwu, ụgwọ, ụgwọ, usoro ịkwụ ụgwọ, na ụdị akụ ị nwere ike itinye na ya.
Nzọụkwụ 2: Mepee Akaụntụ Akaụntụ Share
Ga ugbu a mkpa imeghe a òkè emekọrịta akaụntụ gị họọrọ ore ahia. Iji rube isi na iwu mgbochi ego nke UK, onye na-ere ahịa ga-anakọta ụfọdụ ozi gbasara gị.
Adreesị nke Adị
Nọmba Akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala (Ọ bụrụ na ọdabara)
Nọmba Insurance Mba
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara na a chọrọ onye na-ere ahia ka ọ nakọtara ozi dị ukwuu, nke a bụ n'ihi na ha ga-anwa iji nyochaa njirimara gị nke ọma. Ọ bụrụ na ha enweghị ike ime nke a site na isi mmalite nke ndị ọzọ, enwere ike ịgwa gị ka bulite otu akwụkwọ nga paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, yana ihe akaebe nke adreesị.
Nzọụkwụ 3: Nye Akaụntụ Gị alingnweta Akaụntụ
Ozugbo inwetara akaụntụ gị na -emekọrịta akaụntụ, ị ga-achọ ịkwado ya. Fọdụ ndị na-ere ahịa na ntanetị ga-arịọ gị ka itinye obere ego site na akaụntụ akụ gị. Nke a bụ iji nyochaa na ị bụ ezigbo onye nwe akaụntụ ahụ, yana iji zere igbu oge ọ bụla ma a bịa n'ịwepụ ego n'ihu.
Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, onye na-ere ahịa ga-enye nkọwa ụlọ akụ akụ na mkpa ka e nyefee ego ahụ. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-enye gị ohere itinye ego na kaadị debit gị. Nke a na - ebute ego a na - etinye na akaụntụ gị ozugbo, ọ bụ ezie na njedebe na-adịkarị ala karịa ma e jiri ya tụnyere nnyefe ụlọ akụ.
Kwụpụ 4: Họrọ klasị gị masịrị gị
Ugbu a na inwere akaụntụ azụmaahịa zuru ezu kwụrụ ụgwọ, ị ga-echezi ugbu a gbasara itinye ego ịchọrọ itinye na pọtụfoliyo gị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhọrọ ụlọ ọrụ nke gị itinye ego na ya, naanị chọọ nha anya ziri ezi na igbe ọchụchọ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego na ngwaahịa ndị ọzọ na-etinye ego - dị ka agbụ, indices, ma ọ bụ ego ibe, gafee ngalaba dị mkpa nke weebụsaịtị onye na-ere ahịa.
Kwụpụ 5: Mee Etinye
Ozugbo ịchọtara ego ị chọrọ itinye, naanị ị ga-etinye ego ịchọrọ ịgbakwunye na paụnd na pence. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta shares 1,000 bara uru nke mbak Barclays, tinye enter 1,000 n'ime igbe iji ma kwado ahia ahụ.
Ọ bụrụ n’itinye ego gị na - enweta akụ - dịka nkewa nke na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nkekọ, a ga-ekesara ịkwụ ụgwọ gị dị iche iche na akaụntụ ego gị. Nwere ike ịdọrọ nke a n'oge ọ bụla.
Nzọụkwụ 6: Casgba ego na Akaụntụ Gị Sharerụ Ọrụ
Ma ị nwere ike itinye ego itinye ego gị na ego ga-adabere na akụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịpụpụta ebuka na mbak n'oge ọ bụla n'oge awa ahịa. Ego ego na-abụkwa mmiri mmiri, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwe oge mgbapụta opekempe.
Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, o nwere ike isiri gị ike ị nweta ego itinye ego. Nke a bụ n'ihi na achọrọ ka ị chere ruo mgbe agbụ ahụ tozuru. Nanị ụzọ dị n'akụkụ a bụ ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa akaụntụ na-azụ ahịa nwere ohere ịbanye na ahịa nke abụọ.
Olee otú Họrọ Share Dealer Akaụntụ?
Site na otu narị otu narị akụkọ ndebanye aha na-arụ ọrụ ugbu a na ahịa UK, ịmara onye na-ere ahịa ịdebanye aha ya nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịjụ ajụjụ ndị a tupu anyị adaba.
✔️ Bụ stockbroker iwu site FCA?
✔️ Olee itinye ego ị nwere ike itinye na akaụntụ azụmaahịa gị?
✔️ you nwere ike jikọọ òkè gị na-emekọrịta akaụntụ na ISA?
✔️ Ndi ore ahia na-akwụ ụgwọ ego na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke ewepụghị? Ego ole ka commlọrụ ruru?
Onwere ego iji nweta ahia mba ofesi dika NYSE ma obu NASDAQ?
Top 5 Ekekọrịta Akaụntụ Akaụntụ UK - Kedu nke Broker kacha mma?
Oge adighi ichoputa onye ahia gi? Lelee top 5 UK na-emekọrịta akụkọ n'okpuru.
Ọ bụrụ n’ị gụla ntuziaka anyị gafere, ị kwesịrị inwe nghọta zuru oke ugbu a banyere ihe ịkekọrịta azụmaahịa bụ, otu ha si arụ ọrụ, yana ihe ịchọrọ ile anya tupu itinye ego.
Nke a gụnyere ihe niile site na ụdị akụ onye na-ere ahia na-enye gị ohere itinye ego na ya, ma ị nwere ohere ịnweta ahịa mba ụwa, yana nke dị oke mkpa - ụgwọ ole ị ga-akwụ iji zụọ ahịa.
Na ọtụtụ òkè na-emekọ akụkọ ugbu a n'ahịa, anyị emeela ka usoro nyocha ahụ dị mfe maka gị site na ịdepụta ndị na-enye anyị 5 kacha elu nke 2021. N'ikpeazụ, dị nnọọ ijide n'aka na ị ghọtara njiri ego ego nke onye na-ere ahịa tupu iwere ya.
Kedu ihe akaụntụ nnweta ahịa?
Ihe ndekọ ego na-enye gị ohere itinye ego na mbak, agbụ, ego ibe, ETFs, yana klaasị ndị ọzọ sitere na nkasi obi nke ụlọ gị. A na-enye akaụntụ ahụ n'onwe ya site n'aka onye na-achịkwa ngwaahịa na-achịkwa.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe mgbe ị mepee akaụntụ nnabata?
Nke a ga-adị iche na akaụntụ-na-akaụntụ. Site na nke ahụ, opekata mpe otu n’ime ndị na-ere ahịa edepụtara na ibe a na-enye gị ohere ịmalite site na £ 1.
Kedu ụgwọ ndị na-emekọrịta ndị na-ere ahịa akaụntụ na-akwụ ụgwọ?
Ekekọrịta na-akwụ ụgwọ akaụntụ na-abịa n'ụdị n'ụdị na nha - dịka ụgwọ akaụntụ ọnwa, ụgwọ ahịa mba ofesi, na ụgwọ mgbanwe ego. Agbanyeghị, ego izizi ịchọrọ iji leba anya bụ ụgwọ azụmahịa. A na-ebo ebubo a dị ka ụgwọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke eweghị oge ọ bụla ịzụrụ ma ọ bụ ree akụ.
A na-achịkwa ndị na-ere ahịa akaụntụ na-achịkwa?
Ee, ndị na-ere ahịa akaụntụ na UK na-achịkwa FCA.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ na-emekọrịta ndị na-ere ahịa akaụntụ na-akwado?
Normally na-enwetakarị nhọrọ nke kaadị debit ma ọ bụ nnyefe ụlọ akụ. Ndị na-ere ahịa na-enyekarị gị ohere ịtọ ntọala nkwụnye ego kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego mgbe niile.
Share na-emekọrịta ndị na-ere ahịa akaụntụ na-enye gị ohere itinye ego?
Mba, ị nwere ike itinye ihe ntinye ego naanị na onye na-ere ahịa CFD ma ọ bụ usoro inweta ego.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị m ahụmịhe m na - emekọrịta akaụntụ?
Nwere ike ị kachasị mma ịtụle otu ego ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe nke itinye ego n'ịntanetị. Ego a ga - ejikwa ego gị na nnọchite gị, nke pụtara na ị nwere ohere ịnweta ego na-akwụghị ụgwọ.